Kaabadaha La Iskaga Mooso Khataraha Argagixisada Oo La Dhigay Jidka Hormara Guriga Madaxweyne-Xigeenka Iyo Dareenka Ay Bulshadu Ka Bixisay |
Kaabadaha La Iskaga Mooso Khataraha Argagixisada Oo La Dhigay Jidka Hormara Guriga Madaxweyne-Xigeenka Iyo Dareenka Ay Bulshadu Ka Bixisay
Hargeysa (GNN):- Shacabka caasimadda Hargeysa ayaa shalay ku soo toosay kaabadaha ammaanka oo la dhigay jidka hormara guriga madaxweyne-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici oo ku yaala waddo halbawle u ah isu socodka caasimadda Hargeysa.
Kaabadahan oo ah kuwa ammaanka ee la iskaga mooso khataraha ammaan, ayaa dhawr xabadood la dhigay jidka hormara guriga madaxweyne-xigeenka oo ku yaala xaafadda shacabka ee badhtamaha Hargeysa.
Jidkan oo marka horeba ahaa mid cidhiidhi ah oo loogu tallo galay inay isku weydaartaan laba baabuur oo keliya, ayaa waxa uu shalay noqday mid mashquul ah oo soo kordhiyay sixmad badan, waxaana baabuurta iyo dadka shacabka ah ee jidka mara weheliya ardyda dhigata dugsiga hoose dhexe ee Xuseen-Giire. Sidoo kale jidkani wuxuu tagaa dugsi waxbarasho oo kale oo carruurta da’da yari ay dhigto oo ku yaala xaafadda shacabka.
Kaabadahan uu madaxwene-xigeen Saylici gurigiisa hor dhigay ayaa waxa uu shacabka, gaar ahaan kuwa isticmaala baraha bulshada kala kulmay dareen taban oo ay kaga falceliyaan kaabadahaas.
Dadka qaarkood ayaa isweydiiyay sababta uu Madaxweyne-xigeenku ugu dhiiraday inuu badhtamaha jidka dhigo kaabado ammaan oo loogu tallo galay in la iskaga mooso khataraha ammaanka, “Madaxweyne, waxa gurigaaga; aad hore dhinaciisa dhigtay kaabado waaweyn, imikana jidkii umadu maraysay ayaad kaabado ku xidhatay ood cidhiidhi ka dhigtay, madaxweyne miyaanad ogayn in kaabado badhtamaha jidka la dhigaa ay sumcad xumo ku yihiin ammaanka qaranka.” Sidaas waxa bartiisa baraha bulshada ku qoray muwaadin ka hadlayay kaabadahan.
Muwaadin kale ayaa isna isweydiiyay sababta uu madaxweyne-xigeenku kaabadahan u dhigay jidka, iyadoo magalaooyinka dunida ugu halista badan sida Muqdisho oo kale ay hadda bilaabeen inay jidadka waaweyn ee caanka ah ka qaadaan kaabadahan maadaama oo ay keeneen sumcad darro iyo cabsi amni oo joogto ah.
Waxa xusid mudan in guriga uu degenyahay Madaxweyne-xigeen Saylici uu u dhowyahay guriga Madaxweynihii hore Axmed-Siilaanyo oo aanay wax kaabado amni ahi hareero oolin dhinacyadiisa iyo jidka hormara toona.
Sidoo kale isla xaafadan shacabka waxa isna degen Madaxweynihii hore Daahir Rayaale Kaahin oo isaguna aan jidka gurigiisa hormara dhigin wax kaabado ah.
Madaxweyne-xigeenkii labaad ee Somaliland Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax ayaa isna degen meel aan ka dheerayn guriga saylici, mana jiraan kaabado uu isku deyray.
Saylici ayaa gurigan degay markii uu noqday Madaxweyne-xigeenka, waxaana la sheegay inuu ka iibsaday qoyskii iska lahaa.
Kaabadahan ayaa ahaa kuwii loogu tallo galay in lagu xayiro isu socodka gaadiidka maalintii 18 May ee Qaranimada Somaliland, waxaana markii ay xafladii 18 May dhammaatay dib looga ururiyay jidadkii lagu xidhay.
Si kastaba ha ahaate, shacabka isticmaalaha baraha bulshada ayaa Madaxweyne-xigeenka ugu baaqay inuu ka guro jidka kaabadahan dhawrka ah ee cidhiidhiga ka dhigay jidka oo ah mid muhiim u ah qaybaha kala duwan ee bulshada.